झापामा दुई वर्ष देखि हराएका श्रीमानको बारेमा थाहा पाएर छापा मा’र्न जाँदा अर्कै युवतीसंग रंगेहात भेटेपछि ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 5, 2021 AdminLeaveaComment on झापामा दुई वर्ष देखि हराएका श्रीमानको बारेमा थाहा पाएर छापा मा’र्न जाँदा अर्कै युवतीसंग रंगेहात भेटेपछि ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
श्रीमान हराएपछि उनले खोजीका लागि भन्दै मिडियामा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई कसैले श्रीमानका बारेमा जानकारी दिएको थियो । थप हेर्नुहोस् भिडियोमा: